Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra? (Jakoba 2:23)
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boulou Bété Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Gokana Goun Grika Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathe Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongol Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Éwé
1, 2. Milazà olona sasany naman’i Jehovah.
AZO antoka fa ny olona tianao ihany no hataonao namana. Tianao koa raha mifanaraka tsara aminao ilay olona sady mahafinaritra anao ny toetrany.
2 Nifidy olona sasany ho namany i Jehovah Andriamanitra. Namany, ohatra, i Abrahama. (Isaia 41:8; Jakoba 2:23) Nahafinaritra azy koa i Davida, ka nolazainy hoe ‘lehilahy sitraky ny fony.’ (Asan’ny Apostoly 13:22) ‘Tena tiany’ koa i Daniela mpaminany.—Daniela 9:23.
3. Nahoana i Abrahama sy Davida ary Daniela no lasa naman’i Jehovah?
3 Nahoana i Abrahama sy Davida ary Daniela no lasa naman’i Jehovah? Hoy i Jehovah tamin’i Abrahama: “Satria nihaino ny teniko ianao.” (Genesisy 22:18) Izay manetry tena sy mankatò an’i Jehovah àry no ataony namana. Ny firenen’Israely manontolo mihitsy koa no naman’i Jehovah, taloha. Hoy izy tamin’izy ireo: “Ankatoavy ny teniko, dia ho Andriamanitrareo aho, ary ianareo ho oloko.” (Jeremia 7:23) Mila mankatò an’i Jehovah koa ianao raha tena te ho namany.
AROVAN’I JEHOVAH NY NAMANY
4, 5. Inona no ataon’i Jehovah mba hiarovana ny namany?
4 Milaza ny Baiboly fa mitady fomba “hanehoany ny heriny hamonjena izay mifikitra aminy amin’ny fo manontolo” i Jehovah. (2 Tantara 16:9) Izao no lazain’i Jehovah amin’ny namany, ao amin’ny Salamo 32:8: “Hataoko izay hahatonga anao ho malina, ary hatoroko anao ny lalana tokony halehanao. Hanoro hevitra anao aho ary hitsinjo anao ny masoko.”
5 Misy fahavalo matanjaka be te hanakana antsika tsy ho naman’Andriamanitra. Te hiaro antsika anefa i Jehovah. (Vakio ny Salamo 55:22.) Namany isika ka manompo azy amin’ny fo manontolo. Tsy mivadika aminy mihitsy isika na dia misy zava-tsarotra aza. Mitovy hevitra amin’ny mpanao salamo isika. Hoy izy momba an’i Jehovah: “Tsy hangozohozo aho satria izy eo ankavanako.” (Salamo 16:8; 63:8) Inona no ataon’i Satana mba hanakanana antsika tsy ho naman’Andriamanitra?
ENDRIKENDREHIN’I SATANA NY OLONA
6. Inona no anendrikendrehan’i Satana ny olona?
6 Nianarantsika tao amin’ny Toko faha-11 fa nanendrikendrika an’i Jehovah i Satana. Nolazainy fa mpandainga i Jehovah sady ratsy toetra, satria tsy namela an’i Adama sy Eva hanapa-kevitra irery hoe inona no tsara ary inona no ratsy. Tantarain’ny bokin’i Joba hoe endrikendrehin’i Satana koa izay te ho naman’Andriamanitra. Lazainy fa tsy tia an’i Jehovah akory ny olona fa manantena hahazo zavatra aminy fotsiny dia mody manompo azy. Nilaza mihitsy aza i Satana fa vitany ny mampiala ny olona rehetra amin’Andriamanitra. Andeha isika hianatra momba an’i Joba, ary hojerentsika hoe ahoana no niarovan’i Jehovah azy.
7, 8. a) Iza i Joba? b) Inona no nolazain’i Satana momba an’i Joba?
7 Lehilahy tena tsara fanahy i Joba, ary efa 3 600 taona teo ho eo izay izy no maty. Nilaza i Jehovah fa tsy nisy olona hoatr’azy mihitsy tamin’izany. Tena nanaja an’Andriamanitra i Joba sady tsy tia nanao ratsy. (Joba 1:8) Naman’i Jehovah tokoa i Joba.
8 Nilaza i Satana fa te hahazo zavatra amin’Andriamanitra fotsiny i Joba matoa manompo azy. Hoy i Satana tamin’i Jehovah: “Tsy ianao ve no niaro azy sy ny tranony ary ny fananany rehetra? Notahinao ny asan’ny tanany, ka manenika ny tany ny biby fiompiny. Fa ahinjiro kosa ny tananao, azafady, ary kasiho ny fananany rehetra, dia jereo raha tsy hanozona anao eo imasonao izy.”—Joba 1:10, 11.
9. Navelan’i Jehovah hanao inona i Satana?
9 Nendrikendrehin’i Satana i Joba hoe te hahazo zavatra amin’i Jehovah fotsiny dia manompo azy. Vitany, hono, ny mampiala an’i Joba amin’i Jehovah. Tsy nino ny tenin’i Satana i Jehovah, nefa navelany hanao izay vitany ihany i Satana mba hahitana raha tena tia azy tokoa i Joba.
NAMPIJALIN’I SATANA I JOBA
10. Inona no nataon’i Satana tamin’i Joba, nefa ahoana no nataon’i Joba?
10 Nampiasa olona aloha i Satana mba hangalatra ny biby fiompin’i Joba, ary novonoiny ny ambiny. Novonoiny koa ny ankamaroan’ny mpanompon’i Joba. Tsy nanana na inona na inona intsony àry i Joba. Nandefa tafio-drivotra koa i Satana ka maty daholo ny zanak’i Joba folo. Mbola tsy nivadika ihany anefa i Joba. “Tsy nanota i Joba tamin’izany rehetra izany, sady tsy nanome tsiny an’Andriamanitra mihitsy.”—Joba 1:12-19, 22.
Namaly soa an’i Joba i Jehovah satria tsy nivadika taminy mihitsy izy
11. a) Inona koa no nataon’i Satana tamin’i Joba? b) Ahoana no nataon’i Joba?
11 Mbola tsy nanaiky ihany i Satana. Hoy izy tamin’Andriamanitra: “Kasiho hatramin’ny taolany sy ny nofony, dia jereo raha tsy hanozona anao eo imasonao izy.” Nataon’i Satana narary mafy àry i Joba. (Joba 2:5, 7) Mbola tsy nivadika tamin’i Jehovah ihany anefa i Joba. Hoy izy: “Tsy hanaiky hivadika mihitsy aho, mandra-pahatapitry ny aiko.”—Joba 27:5.
12. Inona no nataon’i Joba ka nanaporofo hoe diso ny tenin’i Satana?
12 Tsy fantatr’i Joba hoe nanendrikendrika azy i Satana, ary tsy hainy hoe nahoana izy no nijaly be. Noheveriny fa i Jehovah no nahatonga an’ilay izy. (Joba 6:4; 16:11-14) Mbola tsy nivadika tamin’i Jehovah ihany anefa izy. Hita amin’izay àry hoe tsy tia tena i Joba, fa tena tia an’Andriamanitra matoa nanompo azy. Diso daholo ny tenin’i Satana!
13. Inona no vokany rehefa tsy nivadika i Joba?
13 Tsy fantatr’i Joba ilay resaka tany an-danitra. Tsy nivadika tamin’Andriamanitra mihitsy anefa izy, ka voaporofo hoe ratsy saina be i Satana. Nomen’i Jehovah fitahiana be dia be i Joba avy eo satria ninamana taminy foana.—Joba 42:12-17.
ENDRIKENDREHIN’I SATANA KOA IANAO
14, 15. Inona no anendrikendrehan’i Satana ny olona rehetra?
14 Be dia be ny zavatra fantatsika avy amin’ny tantaran’i Joba. Lazain’i Satana fa te hahazo zavatra fotsiny isika matoa manompo an’i Jehovah. Hoy i Satana ao amin’ny Joba 2:4: “Izay rehetra ananan’ny olona dia homeny hiarovana ny ainy.” Ny olona rehetra mihitsy àry no endrikendrehin’i Satana hoe tia tena, fa tsy i Joba irery. Mbola manaratsy an’i Jehovah sy manendrikendrika ny mpanompony foana i Satana, na dia efa maty ela be aza i Joba. Hoy ny Ohabolana 27:11: “Hendre, anaka, ary ampifalio ny foko, mba hamaliako an’ilay manaratsy ahy.”
15 Afaka mifidy ny hankatò an’i Jehovah sy ho namany foana koa ianao, amin’izay dia ho hita fa diso ny tenin’i Satana. Mila miova angamba ianao mba ho lasa naman’Andriamanitra, kanefa tsy hanenenanao mihitsy izany. Zava-dehibe izany satria ianao koa endrikendrehin’i Satana hoe hivadika amin’Andriamanitra rehefa misy olana. Inona no ataony mba hampivadika antsika amin’i Jehovah?
16. a) Inona avy ny tetika ampiasain’i Satana? b) Inona amin’ireo no mety hataon’ny Devoly aminao?
16 Tsy tian’i Satana ho naman’Andriamanitra intsony isika ka manao tetika maro izy. Manafika toy “ny liona mierona, mitady olona harapaka” izy indraindray, izany hoe tonga dia manohitra antsika. (1 Petera 5:8) Mety hanakana anao tsy hianatra Baiboly sy tsy hanao ny tsara, ohatra, ny namanao na ny havanao na ny olon-kafa. * (Jaona 15:19, 20) Miseho ho “toy ny anjelin’ny mazava” koa i Satana, izany hoe mamitaka antsika mba tsy hankatò an’i Jehovah. (2 Korintianina 11:14) Mety hataony koa izay hahatonga antsika hieritreritra fa tsy mendrika ny hanompo an’Andriamanitra isika.—Ohabolana 24:10.
ANKATOAVY NY DIDIN’I JEHOVAH
17. Nahoana isika no mankatò an’i Jehovah?
17 Raha mankatò an’i Jehovah isika dia manaporofo hoe mpandainga i Satana. Inona no hanampy antsika hankatò azy foana? Hoy ny Deoteronomia 6:5: “Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny herinao manontolo.” Mankatò an’i Jehovah isika satria tia azy. Lasa vonona hanao an’izay rehetra asainy hataontsika isika rehefa mihatia azy. Hoy ny apostoly Jaona: “Izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny. Tsy mavesatra anefa ny didiny.”—1 Jaona 5:3.
18, 19. a) Milazà zavatra sasany tsy tian’i Jehovah. b) Ahoana no hahafantarantsika hoe vitantsika foana izay asainy ataontsika?
18 Inona anefa no tsy tian’i Jehovah hataontsika? Eo amin’ilay efajoro hoe “ Aza Manao Izay Halan’i Jehovah” ny sasany amin’izany. Mety hieritreritra ianao amin’ny voalohany hoe tsy mampaninona ny sasany amin’ireo. Rehefa vakinao anefa ireo andinin-teny ireo ka saintsaininao tsara, dia ho hitanao fa tena tsara ny mankatò ny didin’i Jehovah. Mety ho hitanao koa hoe tokony hiova ianao, nefa hoatran’ny sarotra be ilay izy. Raha miova anefa ianao dia hilamin-tsaina sady ho faly, satria tsy mivadika amin’i Jehovah ary lasa namany. (Isaia 48:17, 18) Ho vitanao ve ny hiova?
19 Tsy asain’i Jehovah manao zavatra tsy ho vitantsika mihitsy isika. (Deoteronomia 30:11-14) Tena Namana izy ka mahafantatra antsika kokoa noho isika. Fantany ny zavatra vitantsika sy ny tsy vitantsika. (Salamo 103:14) Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy mivadika amin’ny teniny ... Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa rehefa misy fakam-panahy dia hasiany lalan-kivoahana koa, mba hahazakanareo izany.” (1 Korintianina 10:13) Azo antoka fa hampian’i Jehovah hanao ny tsara foana isika. Homeny “hery fanampiny” isika mba hahavita hiaritra rehefa miezaka manao ny tsara. (2 Korintianina 4:7) Nahavita niaritra i Paoly rehefa nampian’i Jehovah. Hoy izy: “Manana ny hery hiatrehana ny toe-javatra rehetra aho, amin’ny alalan’ilay manome hery ahy.”—Filipianina 4:13.
TIAVO IZAY TIAN’I JEHOVAH
20. Inona ny toetra tokony hanananao?
20 Ajanòny izay lazain’i Jehovah hoe tsy tiany raha te ho namany ianao. (Romanina 12:9) Tiavo koa ny zavatra tiany. Voalaza ao amin’ny Salamo 15:1-5 hoe inona avy izany. (Vakio.) Miezaka hitovy toetra amin’i Jehovah ny namany ka mampiseho “fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, hatsaram-panahy, hatsaran-toetra, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena.”—Galatianina 5:22, 23.
21. Inona no tokony hataonao raha te hanana an’ireo toetra tian’i Jehovah ireo ianao?
21 Inona no tokony hataonao mba hananana an’ireo toetra ireo? Mila mamaky sy mianatra Baiboly tsy tapaka ianao, mba hahalalanao hoe inona no tian’i Jehovah. (Isaia 30:20, 21) Lasa tia kokoa an’i Jehovah ianao, amin’izay, ary lasa te hankatò azy.
22. Inona no vokany raha mankatò an’i Jehovah ianao?
22 Rehefa misy fiovana tokony hataonao, dia hoatran’ny hoe manala akanjo tonta ianao ary mampiditra akanjo vaovao. Milaza ny Baiboly fa tokony hanala “ny toetra taloha” ianao, ary hitafy “ny toetra vaovao.” (Kolosianina 3:9, 10) Mety ho sarotra ny hanao an’izany, nefa mampanantena i Jehovah fa homeny “valisoa lehibe” isika raha miova ka mankatò azy. (Salamo 19:11) Ankatoavy àry i Jehovah dia ho voaporofonao hoe mpandainga i Satana. Tsy ny valisoa ho azontsika any aoriana any no tokony ho antony hanompoantsika azy fa ny fitiavantsika azy. Tena ho naman’i Jehovah ianao raha manao an’izany.
^ feh. 16 Izany akory tsy midika hoe i Satana no mibaiko ny olona manakana anao tsy hianatra Baiboly. I Satana anefa no “andriamanitr’ity tontolo ity” sady eo ambany fahefany izao tontolo izao manontolo. Tsy mahagaga àry raha misy olona te hanakana antsika tsy hanompo an’i Jehovah.—2 Korintianina 4:4; 1 Jaona 5:19.
AZA MANAO IZAY HALAN’I JEHOVAH
Mifandray amin’ny demonia
Miteny ratsy sy mifosa
Mihinana ra na manaiky fampidiran-dra
Tsy mety mamelom-bady aman-janaka
Miady sy manao politika
Mifoka sigara na rongony
HEVITRA 1: MANKATÒ AN’I JEHOVAH NY NAMANY
“Ankatoavy ny teniko, dia ho Andriamanitrareo aho, ary ianareo ho oloko.”—Jeremia 7:23
Afaka ny ho naman’i Jehovah ve ianao?
Lasa naman’i Jehovah i Abrahama satria nihaino azy sy nino azy.
Ampian’i Jehovah izay mankatò azy.
Manoro hevitra ny namany i Jehovah.
Arovan’i Jehovah ny namany.
HEVITRA 2: NAMAN’I JEHOVAH I JOBA ARY TSY NIVADIKA TAMINY
“Tsy nanota i Joba tamin’izany rehetra izany, sady tsy nanome tsiny an’Andriamanitra mihitsy.”—Joba 1:22
Inona no nataon’i Satana tamin’i Joba, ary ahoana no nataon’i Joba?
Nolazain’i Satana hoe tia tena i Joba fa tsy tia an’i Jehovah.
Navelan’i Jehovah halain’i Satana daholo ny fananan’i Joba. Nataon’i Satana narary mafy mihitsy aza i Joba.
Tsy hain’i Joba hoe nahoana izy no nijaly, nefa tsy nivadika tamin’i Jehovah izy.
HEVITRA 3: TIAN’I SATANA HIALA AMIN’I JEHOVAH IANAO
“Izay rehetra ananan’ny olona dia homeny hiarovana ny ainy.”—Joba 2:4
Inona no ataon’i Satana mba hampiala antsika amin’i Jehovah?
Mamitaka antsika i Satana mba tsy hankatò an’i Jehovah isika.
Ataony izay hieritreretantsika hoe tsy mendrika ny hanompo an’i Jehovah isika.
Manohitra antsika i Satana.
Ankatoavy i Jehovah, ary aza mivadika aminy mihitsy, dia ho voaporofo hoe mpandainga i Satana.
HEVITRA 4: MANKATÒ AN’I JEHOVAH ISIKA SATRIA TIA AZY
“Izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny.”—1 Jaona 5:3
Ahoana no hatao raha te ho naman’i Jehovah?
Asehoy hoe tia azy ianao. Hanampy anao hankatò azy izany.
Ankatoavy i Jehovah, dia handray soa foana ianao.
Matokia fa tsy hasain’i Jehovah hanao zavatra tsy ho vitanao mihitsy ianao.
Manaova ny tsara, dia hampian’i Jehovah ianao.
Fomba Fiaina Mampifaly An’Andriamanitra (Fizarana 1)
Fomba Fiaina Mampifaly An’Andriamanitra (Fizarana 2)
Fomba Fiaina Mampifaly An’Andriamanitra (Fizarana 3)
Tsy ao am-po fotsiny ny fitiavana an’Andriamanitra.